Angawoonni Afrikaa Bill Clinton faarse ganna 20 booda sirna abbaa-irree diriirsanii argaman jedhame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Angawoonni Afrikaa Bill Clinton faarse ganna 20 booda sirna abbaa-irree diriirsanii argaman...
Angawoonni Afrikaa Bill Clinton faarse ganna 20 booda sirna abbaa-irree diriirsanii argaman jedhame
Haalli biyyoota hunda keessattuu woggaa 20 booda mul'atu gaddisiisaadha
Woggaa 20 dura perezidaantiin Ameerikaa duraanii Bill Clinton perezidaantota biyyoota Afrikaa afuriin ‘hooggantoota Afrikaa sanyii haarawa’ jedheeti kan moggaase. Mallas Zeenaawii, Yuwerii Musevenii, Isaayyaas Afaworqiifi Pool Kagameen turan moggaasa kana yeroo sanitti kan argatan. Sababni guddaan maqaa kana akka argatan isaan taasise hoogganoonni kunniin hoogganoota Afrikaa birootiin adda ta’u abdii jedhuun akka Huffington Post itti. Bara 1990n keessaafi achiin durattis angawoonni Afrikaa heddu humnaan angoo qabatu, qabatan ammo irraa hinbu’an- wolumaagalatti irreen bulchan ture.
Angawoonni biyyoota arfan kanaa maqaa sirna abbaa irree hiddaan buqqisuu, dimokraasiifi bulchiinsa gaarii dagaagsuu jedhuun gara angootti dhufan kanniin irraa waaheddutu eegamee ture. Garuu, sirni hedduun isaanii diriirsaniifi umriin angoo isaanii kan isaan balleessanii taayitatti dhufan irra hammaate. Yuweri musevenii ganna 29f, Pool kagaamee ganna 21f, Mallas Zeenaawii ganna 21f (hanga du’a isaatti) fi Isaayyaas Afawoqkii 24f biyyoota isaanii bulchan. Bara 1990n keessa tokkoon namaa angawoonni kunniiniifi paartileen isaanii akkas akka silmii angoo ciniinaanii irratti du’an jedhee kan tilmaame hinturre. Ummanni sirna dimokraasii diriirsina, aduu bulchiinsa gaarii baasna jedhan yeroo kanatti suni hundi osoo hintaane hafee garee Roobert Mugaabee (ganna 35f Zimbaabwe), Joosee Edwaardoo dos Saantoos (ganna 36f Angoolaa), Obiyaang Inguemaa ganna 36 (Ikuwaatoriyaal Giinii )fi Pool Biyaa ganna 33 (Kameroon) irreen bulchanitti makaman.
Abdii sirna dimokraasii diriirsan, biyyoota isaanii dukkana keessa baasan jedhamuun osoo eegaman namoonni kunniin irrummaa babal’isan. Eertiraan biyya heera hinqabne. Erga wolabummaa isii gonfattee hanga har’aatti bulchiinsa nama tokkoo jalatti kuftee kan jiraattu. Paartii tokko kan biyyattii bulchu. Akka biyyoota Aafrikaa heddu keessatti godhamu, filannoofi sirna paartii hedduu waan jedhamuun wolquba hinqabdu biyyattiin. Haalli Pool Kagameen Ruwaandaa woggaa 21 ittiin bulche hedduu isa Eertiraa irraa addaaddummaa hinqabu. Biyyattiin heera qabdi. Rakkoon garuu namoonni yaadaafi ilaalcha paartii biyyattii bulchuun adda ta’e qaban nidoorsisamu, ajjeefamu, biyya irraa akka baqatan taasifamu.
Itoophiyaa keessattis haalli har’a jiru isa 1991n hedduu adda. Biyyattii keessatti mirgi ummanni qabu yeroodhaa yerotti shasharafamaa, dhiphataa, namoonni mootummaa morman mana hidhaafi baqa jiruu godhataa jiraatu. Heerii biyyattii hinkabajamu. Cabuu isaatiif yeroo heddu kan himatamu mootummichuma angoo irra jiru. Preesiin wolbaa akka yaada wolba ta’e calaqqisiisuuf hinhayyamamu. Paartileen mormitootaas akka ijaaraman, cimaaniifi sodaan alatti sosso’aniif hinhayyamamu. Inumaa doorsisamu, mataa keessa dhahamu. Wolumaagalatti, fakkeessaaf waan godhamu malee murannoon sirana dimokraasiifi bulhiinsa gaarii miilan gadi dhaabuuf, heera biyyattii kabajuuf godhamu nijira jedhanii dubbachuun nama rakkisa.
Yugaandaa qofa, akka Huffington Post itti, xiqqaatus gama miidiyaatiinis ta’ee mirgoota biro kabajuutiin biyyoota sadiin hafan irra fooyya’iinsa kan qabdu.
angoo irra turuu
Previous articleKompitaroonni boruu waan kiisa kaayatan ta’uuf deema jedhama
Next articleSufiyan Ahmed Among Eight Candidates for African Development Bank presidency